I-Acacia lodge, Lake Kariba - I-Airbnb
I-Acacia lodge, Lake Kariba
Kariba, Mashonaland West Province, iZimbabwe
I-indlu yeholidi eyakhiwe ngokhuni ephelele ibungazwe ngu-Patrick
I-Acacia Lodge ihlezi eduze kosebe lweLake Kariba egcwele izilwane zasendle nokudoba okumangalisayo emnyango wakho. Isendaweni eyinkimbinkimbi futhi ephephe kakhulu ngokuvikeleka okuhlinzekiwe. Indlu inamakamelo amathathu okulala, amagumbi okugeza amabili kanye nendawo yokulala ayisithupha. I-lodge iyaziphekela ngakho konke okuhlanganisa i-aircon, abalandeli, umshini wokuwasha, i-barbeque, i-back up generator njll. Iseviswa nsuku zonke futhi konke ukuwashwa nokupheka kwenziwa ngumpheki. Kukhona i-splash pool endaweni yokulala yalezo zinyanga ezishisayo zaseKariba.
I-Acacia Lodge isenkabeni yesiqiwu kanti izilwane zasendle ziyanda akujwayelekile ukubona imvubu nendlovu zizibuza zidlula endaweni yokulala ebusuku. ibhubesi lezikhathi ezithile , ingwe kanye neHyaena ukubala okumbalwa.Ngesikhathi sokomisa kunethafa eligcwele izikhukhula phambi kwendawo yokulala elinikeza izindlela ezimangalisayo zokuklaba kwezilwane ezifuywayo futhi lenze uhambo oluhle nokubuka izinyoni.Lapho ichibi seligcwele kakhulu amanzi azobe edla utshani obungaphambili.Igumbi ngalinye line-AC kanjalo nefeni futhi kukhona amafriji amabili, iziqandisi ezimbili ezijulile, i-oven, i-microwave, umshini wokuwasha, umpheki wegesi, i-scottle, i-barbeque, umshini wekhofi we-nespresso one-frother, i-TV enesathelayithi (izivakashi ziyadingeka ukuthi ziziphathele idekhoda yazo ye-pvr). Kukhona ichibi le-splash ngaphambili kwendawo yokulala kanye nechibi elikhulu lomphakathi ngaphakathi kwesakhiwo esiphinde sibe ne-gazebo, izindlu zangasese kanye nezindawo zebarbeque.
Kumdobi kunendlela echwensayo ukuze uvule isikebhe sakho (kanye nogandaganda oqhutshwa yisakhiwo esizosiza ekuqaliseni uma kudingeka ) kanye nechweba elivikelekile ngaphambi nje kwendawo yokulala .
3 imibhede eyidabuli emincane
I-Acacia Lodge isenkabeni yesiqiwu kanti izilwane zasendle ziyanda akujwayelekile ukubona imvubu nendlovu zizibuza zidlula endaweni yokulala ebusuku. ibhubesi lezikhathi ezithile , ingwe kanye neHyaena ukubala okumbalwa.Ngesikhathi sokomisa kunethafa eligcwele izikhukhula phambi kwendawo yokulala elinikeza izindlela ezimangalisayo zokuklaba kwezilwane ezifuywayo futhi lenze uhambo oluhle nokubuka izinyoni.Lapho ichibi seligcwele kakhulu amanzi azobe edla utshani obungaphambili.
Umpheki uFreddy uzotholakala ukuze akusize nganoma yini ongase uyidinge endaweni yokulala uyinsizwa ehlakaniphile, ukupheka ohlakaniphile futhi onolwazi kakhulu. Ngeke ngitholakale mathupha kodwa ngicela ungangabazi ukungithinta ngocingo uma unezinkinga.
Umpheki uFreddy uzotholakala ukuze akusize nganoma yini ongase uyidinge endaweni yokulala uyinsizwa ehlakaniphile, ukupheka ohlakaniphile futhi onolwazi kakhulu. Ngeke ngitholakale…